Shiinaha warshad aan caadi ahayn / Qalabka Gaarka ah iyo soosaarayaasha | Jitai
Xirmooyinka Opto-Elektarooniga ah
Qalabka aan caadiga ahayn / Gaarka ah
Xirmooyinka Aluminium ee Aluminium
Faa'iidooyinka laga helo aluminiumka aluminiumku waa culeyskiisa fudud, xooggiisa adag, iyo sahlanaanta lagu qaabeyn karo. Sidan oo kale waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarista baakadaha elektarooniga ah.
Kuleylka kuleylka sareeya
• Cufnaan hoose
• Kala-beddel wanaagsan iyo shaqeyn, silig goynta, shiidi iyo dahaarka dahabiga dusha sare ayaa lagu sameyn karaa.
MUUQAAL KHAYRAAN KU SAABSAN BARASHADA JOOGTADA / / 10-6 / K DHAQANKA JOOGTADA / W · (m · K)-1 CUDURKA / g · cm-3
Xirmooyinka Aluminium Silicon Aluminium
Albaabbadaha Si / Al ee loogu talagalay baakadaha elektaroonigga ah badanaa waxay tixraacaan walxaha isku-dhafan ee eutectic-ka oo leh maadada 'silicon' ee 11% ilaa 70% Cufnaanteedu way hooseysaa, isugeynta kororka kuleylka waxaa lagu dheelitiri karaa qashinka iyo substrate, iyo awoodda ay u leedahay inay kuleylka baabiiso waa mid aad u fiican. Waxqabadka mashiinka ayaa sidoo kale fiican. Natiijo ahaan, Alloysyada Si / Al waxay leeyihiin awood aad u ballaaran oo ku saabsan warshadaha baakadka elektarooniga ah.
• Kala-baxa kuleylka degdega ah iyo kuleylka kuleylka oo sarreeya ayaa xallin kara dhibaatooyinka kala-baxa kuleylka ee ku jira sameynta aaladaha awoodda sare leh.
• Isku-dheellitirka ballaarinta kuleylka ayaa la xakamayn karaa, taas oo ka dhigaysa mid suurtogal ka dhigaysa in la jaanqaado ta jab, iyadoo laga fogaanaayo isku-buuqa kuleylka ee xad-dhaafka ah ee sababi kara qalabka.
Magacaabista 'Alloy CE' Halabuurka 'Alloy' CTE ， ppm / ℃ ， 25-100 ℃ Cufnaanta, g / cm3 Kuleylka kuleylka ee 25 ℃ W / mK Xoog Laab ， MPa Xoog Bixi ， MPa Elastic Modulus ， GPa
Dheeman / Copper, Dheeman / Aluminium
Dheeman / Copper iyo Dheeman / Aluminium waa walxo isku dhafan oo leh dheeman sida wajiga xoojinta iyo naxaasta ama aluminium sida maaddada matrixka. Kuwani waa kuwo aad u tartan badan oo rajo leh qalabka baakadaha elektiroonigga ah. Labada guri ee dheeman / naxaas iyo dheeman / aluminium, kuleylka kuleylka ee aagga qashinku waa ≥500W / (m • K) -1, oo lagu qanco waxqabadka looga baahan yahay kala-baxa kuleylka badan ee wareegga. Iyada oo la sii ballaadhinayo cilmi-baarista, noocyada noocan ah ee guryaha ayaa kaalin muhiim ah ka qaadan doona dhinacyada baakadaha elektiroonigga ah.
• Kuleylka kuleylka
• Isku-dheellitirka ballaarinta kuleylka (CTE) waxaa lagu xakamayn karaa iyadoo la beddelayo jajabka tirada ee maaddooyinka dheeman iyo Cu
• Kala-beddel wanaagsan iyo shaqeyn, silig goynta, shiidi iyo dahaarka dahabiga dusha sare ayaa lagu sameyn karaa
MUUQAAL KHAYRAAN BAARITAANKA JOOGTADA / TH 10-4 / K DHAQAN-GELINTA JOOGTADA / W · (m · K) -1 CUDURKA / g · cm-3
DIAMOND ALUMINUM 7 > 450 3.2
Aluminium nitride dhoobada waa qalab farsamo dhoobada ah. Waxay leedahay sifooyin heerkul, farsamo iyo koronto heer sare ah, sida ku shaqeynta korantada oo sare, qaraabo yar oo koronto ku shaqeeya, silsilad isku dheelitir ah oo ballaadhin toosan ah, dahaadh koronto oo aad u fiican, iyo cufnaan hoose. Ma aha mid sumaysan oo xoog badan. Horumarka baahsan ee qalabka microelectronic, aluminium nitride ceramics oo ah qalab aasaasi ah ama loogu talagalay guryaha xirmada, ayaa noqday mid caan ah. Waa qalab rajo leh oo isku dhafan oo isku dhafan oo isku dhafan iyo qalab wax lagu duubo.
• Qabsashada kuleylka sare (qiyaastii 270W / m • K), oo u dhow BeO iyo SiC, iyo in ka badan 5 jeer tan Al2O3
• Isugeynta kororka kuleylka waxay la egtahay Si iyo GaAs
• Waxyaalaha korantada ku fiican (kuwa yar yar ee koronto-dhaliyaha, luminta korantada, mugga adkaysiga, xoog koronto)
• Awood farsamo sare iyo waxqabadka mashiinka ku habboon
• Astaamaha habboon ee indhaha iyo microwave-ka
• Aan sun ahayn
Hore: KU Xidhmooyinka
Xiga: Xirmooyinka HIC
TAGS wax soo saarka
Magaalada Yixing City Jitai Electronics Co., Ltd.